3.2mm kana 4mm Yakakwira yakajeka girazi panopisa girazi
3.2mm kana 4mm Ultra yakajeka textured girazi rezuva inonziwo girazi re photovoltaic iro rainyanya kushandiswa pane rezuva panhare nekuda kweyeyakanyanya mwenje wekutumira mwero. Solar pani yakatetepa nhete ye optoelectronic semiconductor iyo inoshandura simba rezuva kuita magetsi. Nokufunga kushanda kwayo ...
Chii chinonzi Ultra-yakajeka girazi? Ndeupi musiyano neakajairika girazi?
1. Hunhu hwegirazi rakachenesa Ultra-girazi Ultra-yakajeka girazi, inozivikanwawo segirazi repamusoro-girazi uye girazi rakadzika-simbi, irudzi rwegirazi rinoonekera-rakadzika-simbi. Yakakwira sei kupenya kwayo kwechiedza? Chiedza chinotumira chegirazi yakajeka-yakajeka inogona kusvika kupfuura 91.5%, uye ine chara ...
Iwe unoziva iyo yekushisa tembiricha yegirazi inki?
1.Kupisa tembiricha girazi inki, inonzi zvakare yakanyanya tembiricha yakadzikama girazi inki, sintering tembiricha iri 720-850 ℃, mushure mekushisa kwakanyanya kupisa, inki negirazi zvakasunganidzwa zvakabatana. Inoshandiswa zvakanyanya mukuvaka machira emaketeni, girazi remotokari, girazi remagetsi, nezvimwe. 2. Girazi regirazi inki: ...
Maitiro ekudzivirira kumucheto kutsemuka kana uchicheka girazi nemvura jet?
Kana jekiseni remvura richicheka zvigadzirwa, mimwe michina inozove nedambudziko rekucheka uye isina kuenzana magirazi magirazi mushure mekucheka. Muchokwadi, yakanyatsogadzika waterjet ine matambudziko akadaro. Kana paine dambudziko, zvinotevera zvinhu zvejjeti yemvura zvinofanirwa kuongororwa nekukurumidza sezvazvinogona. 1. Wate ...
Nzira yekusiyanisa "girazi" - mutsauko pakati pezvakanaka zvegirazi rakamisikidzwa uye girazi rinovhara
Chii chinonzi insulating girazi? Inodzivirira girazi rakagadzirwa nemaAmerican muna 1865. Iyo mhando nyowani yezvivakwa zvine kupisa kwakanaka kwekudzivirira, kuputira inzwi, aesthetics uye kushanda, izvo zvinogona kudzikisira huremu hwezvivakwa. Inoshandisa zvidimbu zviviri (kana zvitatu) zvegirazi pakati pegirazi. Equipp ...